Saadka Aasaasiga ah ee Jaamacadda iyo Beykoz University Saxiixa R&D Iskaashiga Borotokoolka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulShirkadda Saadka ee Mars Lojistikada iyo Jaamacadda Beykoz ayaa kala saxiixday Borotokoolka R&D Iskaashiga Borotokoolka
22 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
mars logistics iyo beykoz jaamacadda waxay saxiixday borotokoolka iskaashiga r & d
Ku sii wadista waxbarashadeeda iyada oo loo marayo baaxadda isbeddelka dhijitaalka ah, Shirkadda Mars logistics waxay la saxiixday borotokool iskaashi Jaamacadda Beykoz oo loogu talagalay sirdoonka dabiiciga ah iyo xalalka tikniyoolajiyada cusub Iyada oo laga duulayo waxqabadka iskaashiga, mustaqbalka waaxda saadka ayaa labadaba cilmi ahaan looga wada hadli doonaa oo kheyraadka aadanaha ee aqoonta leh ayaa lagu tababari doonaa waaxda.
Shirkadda logistics Turkey ayaa keentay Mars Logistics diinta digital ka leexinayn ee R & D maamuuska iskaashiga saxiixay la University of Beykoz. Heshiiska, oo tusaale u ah iskaashiga jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay, labada urur waxay ku biiri doonaan xoogag xal u helida kaabayaasha tikniyoolajiyada ee warshadaha saadka. Qaybta aqoonta ee loojistikadda Mars, oo leh 30 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaa lagu taageeri doonaa si cilmiyeysan iyada oo la adeegsanayo daraasadaha aqoonyahannada, iyada oo ay gacan ka geysaneyso tababbarka ilaha aqoonta aadanaha ee waaxda loojistikada.
Waaxda saadka ayaa lagu taageeri doonaa daraasadaha sayniska
Agaasimaha Farsamada Macluumaadka Teknolojiyada ee Mars Fatih Badur ayaa sheegtay in iskaashiga lagu xaqiiqsaday inta uu gaarsiisan yahay kaabayaasha tikniyoolajiyada ay tahay daraasad muddo-dheer. Waxaan aqoonsan doonnaa mashaariicda aan uga baahan nahay waaxda, ka dib waxaan uga wada hadli doonnaa shirar wada-tashi ah oo aan ku dhexgelin doonna nolosheenna. Dabcan, waxaan sidoo kale ka filaynaa tabaruc ardayda ardayda jaamacadaha ee wax barata. Taageeradooda aqooneed waxay ka jawaabi doontaa dalabkeena. Hawshan, waxaan higsaneynaa inaan u abuurno ilo tayo leh oo bini-aadam ah warshadeena. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ku darno hibooyinka da 'yarta ah jirkeenna inta ay ku jiraan shaqooyinkeenna. ”
Bakhaarada aan la maamulin ayaa beddelaya bakhaarradii caadiga ahaa
Isagoo ogaynaya inuu jiro isbadal weyn oo ku yimaada teknolojiyada mustaqbalka ee dhanka saadka, Fatih Badur wuxuu yidhi, “Xalka sida tikniyoolajiyadda casriga, sirdoonka macmalka, isbadalka dijitaalka ayaa noqon doona ishayaga ugu weyn. Xilliga soo socda, waxaan fileynaa isbadal weyn xagga saadka, gaar ahaan nidaamyada maaraynta bakhaarka. Waxaan sugi doonnaa bakhaar ay gacanta ku hayaan internetka ee waxyaabaha, nidaamyada robotic. Hadda, waxaan ka tagnaa bakhaarrada caadiga ah waxaanan u tagnaa bakhaarrada aan duuga ahayn. Bilişim waxay ku dari doontaa nidaam falanqeyn doona wixii la soo dhaafay iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadda sirdoonka ee aan dabiiciga aheyn isla markaana ay faallo ka bixin doonto mustaqbalka waaxda saadka. ”
Mars Logistics waxay ku maal gashey 27 million euro oo ah gaadiidka Intermodal
Mars Logistics si ay u sii wadaan rakaabka semi-trailer Otokar Huckepack
KOSGEB iyo Iskuxidhka Xirfadaha ee Beykoz Logistics